Culeys soo fuulay xafiska caawiya dadka dhaca loo geysto. - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Culeys soo fuulay xafiska caawiya dadka dhaca loo geysto.
La daabacay måndag 6 augusti 2012 kl 12.09
Waxaa sii kordhaya dadka dhibanayaasha ee la soo xiriirra xafiiska BOJ. Photo: Marc Femenia/Scanpix
Waxaa sii badanaya dadka la soo xiriiro ururka caawiya dadka loo geysto falal dhac ama xatooyo ee marka la soo gaabiyo afka Iswidhiska lagu yiraahdo BOJ. Laakiin ururka ayaa sheegaya in uusan heyn dhaqaale oo ku maareeyo xiriirrada lala soo sammeynayo sida uu baahiyay Raadiyaha Iswiidhan.
Dhaqaale yari xagga lacagta ayaa jirta, ayay tiri Monica Klitten oo ah shaqaalaha keliya mushahar qaata ee ka tirsan xafiiska ururka BOJ ee koonfur galbeed magaaladda Stockholm.
Dad gaaraya 1 500 qof ayaa soo wacay xafiiska ururka caawiya dhibanayaasha ee ku yaalla koonfur galbeed Stockholm taasi oo ah sare u kac boqolkiiba boqol iyada oo taasi ay ku noqoneyso labo laab tirada dadka la soo xiriiray xafiiska sanadkii hore.
Ma ahan oo keliya xafiiskan oo qura ee 17 xafiis ee ururka uu ka leeyahay dalka oo idaacadda Iswiidhan la xiriirtay ayaa sheegay in ay aad u badanaayaan dadka soo waca ee loo geysto fal dambiyeed dhac ah.
Xafiiska guud ee ururkan ayaa sheegaya in 25 boqolkiiba ay soo kordheen dadka soo waca xafiisyadooda guud ahaan dalka.
Cadaadiskan koroka ee soo wajahay ururka BOJ ayaa ah mid si sahlan loo sharixi karo. Tan iyoo bishii Diseembar ee sanadkii hore booliska dalka ayaa laga doonayaa in in ay weydiiyaan dadka la dhaco in ay doonayaan inay la xiriiraan xafiiska caawiya dadka la dhaco iyada oo aan la eegeyn haddii dhaca uu yahay tilifoonada gacanta lagu qaato ama dhac kale.
Ururkan caawiya dadka loo geysto fal dambiyeedyada dhaca ah ayaa howlahiisa waxay yihiin inta badan iska wax u qabo waxayna dadka ka shaqeeya ay ka caawiyeen dhibanayaasha la dhaco qorista dacwada iyo in ay la tagaan maxkamada marka la furo dacwooyinka dadka la dhacay.